नाम नयाँ तरिका पुरानै
नयाँ शक्तिको अन्तरिम केन्द्रीय परिषदका सदस्यमा चयन भएका ३५ प्लस २२ जनाको नाम सार्वजनिक भएको तरिकाबाटै यो शक्तिको भावी राजनीतिक चयन प्रक्रियाको साँस्कृतिक अभ्यासको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
जुन प्रकारले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म संयोजक र समितिहरु निर्माण भैरहेका छन् त्यो गठन प्रक्रिया नै गलत छ । मान्छेले पत्याउन या नपत्याउन् हामीमाझ रहेको राजनीतिक संस्कारको हिसाबले यति अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ कि भोली हुने महाधिवेशनले यहि जिम्मेदारी बाँडफाँडलाई नै हुबहु सदर गर्नेछ । यस मानेमा नयाँ शक्तिको भावी स्वरुप अहिले नै देखिन थालेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
तर के हामीले खोजेको नयाँ शक्तिको निर्माण प्रक्रिया यही हो त ? यसरी नै नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास संभव छ त ?
केन्द्रीय परिषदमा बस्नको लागि १ हजारज्यादा सदस्यहरूको दरखास्त खल्तीमा बोकेर हिँडेका भनिएका बाबुरामले पूर्व एमाओवादी सहयात्रीकै प्रेसर झेल्न सकस परेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । नभए ‘फलानाहरु त पक्कै हुनुपर्ने’ भनिएकाहरू नै ५७ जनाको प्रारम्भिक टिममा परेका छैनन् । सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा के रह्यो भने भने अब बाँकि सदस्यको चयन तिनै ५७ को सिफारिसमा हुनेछ । यस मानेमा एक हदको निर्णायक र निर्णित वर्गको निर्माण केन्द्रीय समितिभित्रै स्थापित हुने पक्का भएको छ ।
गतहप्ताको आइतबारसम्म ‘म अझै काँग्रेसमैं छु’ भन्ने रामेश्वर खनाल हुन् कि ‘… बाबुराम बाबुराम भन्न सकिन्छ, नयाँ शक्तिमा लाग्न सकिन्न’ भनेर ट्विट मार्ने मुमाराम हुन् तिनीहरुको नाम केन्द्रीय परिषदको पहिलो लिष्टमैं आएको छ । यसलाई बाबुरामजीको कन्भिन्सिङ कप्यासिटीको रुपमा बुझुँ कि खनालद्वयको बार्गेनिङ सफलता ? रनभुल्लमा छु ।
पार्टी निर्माण र जिम्मेदारीको बाँडफाँडमा जुन राजनीतिक अभ्यास गरिनुहुन्न भनेर नयाँ शक्तिको स्थापनाको कुरा भयो, अहिले त्यही अभ्यासले आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो समितिमा पद हासिल गर्न थानका थान पूर्व पार्टीका कार्यकर्ताहरु भेटभाटमा ब्यस्त छन् । विशेषगरी पूर्व एमाओवादीबाट यता आएका कार्यकर्ताहरूमा स्थान बिशेषको माग र मोह ज्यादा देखिन्छ । राजनीति नामको अफिमको लत एकफेर बसालिसकेका दूर्व्यसनीहरुले ‘फेरिएँ’ भनेर बोल्दैमा अवचेतनको राजनीतिक कुसंस्कार एकाएक कहाँ बदलिन्थ्यो ? अफिमको तलतलले किलकिले सक्सक हुन थाल्न कुनै बेर लाग्दैन । पूर्व एमाओवादी हेजिमोनीकै, तलतलकै, शैली–शिल्पकै प्रयोगले हामी कस्तो नयाँ र सिर्जनात्मक राजनीतिको अपेक्षा गरिरहेका छौं ?
नयाँ शक्तिमा तत्काल ठुलो जनसंख्या देखाउनका लागि जथाभावी मान्छेहरु भर्ती गर्दै जाने हतासाबाट मुक्त हुन सकिएन भने नयाँ शक्ति आमा समूह, युवा क्लब वा टोल सुधार समितिको साइजमा परिणत हुनेछ ।
राजनीतिको रङ्ग खैरो हुन्छ भन्नेहरुले नयाँ शक्तिको रङ्ग पनि खासमा फरक नभएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । नयाँ शक्तिको नाममा गत तीन महिनाको हाराहारीमा भएका ‘सामाजिक बहस’ भनिए पनि खासमा संयोजक बाबुरामको एकल देश दौडाहा, एकल सुझाव संकलन र एकल निर्णयको सदस्य चयनबाट यसको पार्टी प्रशासनको जग हालिएको छ । गतहप्ताको आइतबारसम्म ‘म अझै काँग्रेसमैं छु’ भन्ने रामेश्वर खनाल हुन् कि ‘… बाबुराम बाबुराम भन्न सकिन्छ, नयाँ शक्तिमा लाग्न सकिन्न’ भनेर ट्विट मार्ने मुमाराम हुन् तिनीहरुको नाम केन्द्रीय परिषदको पहिलो लिष्टमैं आएको छ । यसलाई बाबुरामजीको कन्भिन्सिङ कप्यासिटीको रुपमा बुझुँ कि खनालद्वयको बार्गेनिङ सफलता ? रनभुल्लमा छु । रामेश्वरजीले त प्रचार विभाग प्रमुखका झैं मिडियामा नयाँ शक्तिको गुनगान पनि गाउन थालिसक्नु भएको छ ।
विरेन्द्रको वंश विनासपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले दशैंको छेको हानेर पारसलाई देशको युवराज घोषणा गरेका थिए । पारसप्रतिको जनताको असम्मान सायद त्यसको प्रमुख कारक थियो । छ महिनासम्म अन्तरिम ‘शाहज्यादा’ रहेका पारस जस्तै गरेर नयाँ शक्तिमा पनि अन्तरिम अभियन्ताहरू छन् । र ती को को हुन् सबैलाई थाहा छ । भावी नयाँ युवराज, युवराज्ञी वा महारानीहरूको घोषणा कुनै एक सही समयमा हुनेछ भन्ने कुरा पनि सायद अनुमान गर्नु पर्दैन ।
देश भनेको कुनै प्राइभेट लिमिटेड होइन जसका सिइयो फेरिदैँमा नाफाको कायाकल्प होस् । देश कम्पनी होइन, जसको पुरापुर शेयर खरिद्दिएर तुःका तुः दोहोरो अङ्कको नाफामा लैजान सकियोस् । देश जित्न जनताको मत जित्नु पर्छ ।
संविधान घोषणा लगत्तै एमाओवादी छोडेर नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका बाबुराम भट्टराईले तत्कालै मधेसमा गएर संविधानको विरोध गरेर मधेसी दलसँग ऐक्यबद्धता देखाए । तर जुन आधारमा नयाँ शक्तिको स्थापत्य बन्दै छ, त्यसको आधार संविधान निर्माण नै हो भनेर स्वयम् बाबुरामले भनेका छन् । गणतन्त्रात्मक संघियतायुक्त संविधान बनाउने एक प्रकारको खास उपलब्धि भैसकेपछि नयाँ ढंगको राजनीतिक अभ्यासका लागि नयाँ शक्तिको आवश्यकता देख्ने बाबुराम भट्टराई संविधानलाई परम्परीत हिसाबले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
जुन राजनीतिक घटस्थापनको जमरा उमार्ने अभ्यास पूर्व सरकारी कारिन्दा, पूर्व सुरक्षा प्रशासक, रोमान्टिक अभिनयकर्ता अनि अधिकांस ६० प्लस मगजको केन्द्रीयताबाट सञ्चालित हुन्छ त्यो नयाँ शक्ति हो भन्ने विश्वास मुश्किलले गर्न सकिन्छ । ‘पूर्व’ प्रधानमन्त्री बाबुरामको यो ‘पूर्व’मोह अजबसँग आएको छ । तिनीहरु हुनु गलत हो भनेको होइन, ‘नयाँ अनुहार’को अभिप्सामा तिनीहरू मात्रैलाई समेट्न सक्नु बाबुरामजीको कमजोरी र हतासाको प्रतिफल हो ।
देश भनेको कुनै प्राइभेट लिमिटेड होइन जसका सिइयो फेरिदैँमा नाफाको कायाकल्प होस् । देश कम्पनी होइन, जसको पुरापुर शेयर खरिद्दिएर तुःका तुः दोहोरो अङ्कको नाफामा लैजान सकियोस् । देश जित्न जनताको मत जित्नु पर्छ । जुन सारथि राखेर महाभारत जितिन्न त्यस्तो रथारोहणको रहरको कारण बुझनीय छैन ।
नयाँ शक्तिको शुभेच्छुकको रुपमा म यत्ति कामना गर्छु : बरु कुनै एनजिओ खोलेर आफ्नो क्षमता र सम्पर्क प्रयोग गरेको भए राज्यकालागि थप योगदान हुनसक्थ्यो भन्ने पछुतो बाबुरामजीमा कहिल्यै आउन नपरोस् !